नेपाल आज | जसले दियो, उसैले खोस्यो
बुधबार, २३ पुष २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
अमेरिकी आक्रमणबाट इराकको राजधानी बग्दादमा इरानी सैनिक जनरल मारिएपछि इरान– अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर विश्व तरंगित भएको छ । पछिल्लो चार दशक अमेरिका र इरानको सम्बन्ध कटू रहँदै आएको छ । कटुताको मात्रा भने फेरबदल भइरहन्छ । तर, ४ दशक अघि इरान र अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुरमात्र थिएन, इरानलाई सैन्य शक्ति बनाउन अमेरिकी सिप र प्रविधिको प्रयोग भएको थियो ।
सन् १८५० को जुनमा दुई देशका बीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको थियो । कुटनीतिक सम्बन्ध जोडिएपनि बिसौँ सताब्दीको मध्यसम्म इरानमा अमेरिका महत्वपूर्ण खेलाडी थिएन । अमेरिका इरानलाई ब्रिटेन(बेलायत)को नजरले हेर्ने गथ्र्यो । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले इरानमा बेलायत र सोभियत युनियन (रुश) महत्वपूर्ण थिए । उपनिवेशको होडबाजीका कारण बेलायत र सोभियत युनियनप्रति इरान ढुक्क थिएन । साँस्कृतिक र भौगोलिक हिसावले बिराट इरान आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने प्रयासमा थियो ।
यस्तो प्रयास जसले इरानलाई बेलायत र सोभियत युनियनको चेपुवाबाट बाहिर निकाल्न सकोस । सन् १९२५ मा राजा बनेपछि रेजाले इरानको अर्थ र शासनब्यवश्थालाई ठीक पार्न सुधारका धेरै प्रयास गरे । त्यसैस्वरुप इरानी राजा रेजा पल्लबी शाहले अमेरिकी अर्थविद्हरुलाई नियुक्त गरे । अमेरिकाको विदेश विभागका सल्लाहकार रहिसकेका आर्थर मिल्सपावलाई अर्थमन्त्रीको हैसियतसहित इरानको अर्थव्यवश्था सुधारको जिम्मा दिइयो ।
बेलायत र सोभियत संघको बर्चश्वलाई सन्तुलनमा राख्न राजा रेजा शाह पल्लबीले जर्मनीलाई इरानमा लगानी गर्न प्रेरित थिए । रेजाको एकपछि अर्को आक्रामक नीतिका कारण बेलायत र सोभियत युनियन सन्तुष्ट थिएनन् । फलस्वरुप इरानमाथि आक्रमण गरियो । इरानको सैन्य क्षमता लज्जास्पद ठहरियो । सेनाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसमेतले बिदेशीसँग साँठगाँठ गरेको रेजाको ठहर थियो । आखिरमा रेजाको केही सिप लागेन । आफू निर्वासनमा जान र छोरा मोहम्मद रेजा पल्लबीलाई राज्य सुम्पिन उनी तयार भए । यतिन्जेलपनि इरानमा अमेरिकाको भूमिका खाशै देखिदैनथ्यो ।
पुत्र पल्लबीको शासनकालमा अमेरिका
रेजा पल्लबी शाहका छोरा मोहम्मद रेजा पल्लबी सन् १९४१ मा राजा भए । सन् १९५२ मा इरानी संसदले महत्वाकाँक्षी मोहम्मद मोसादेघलाई प्रधानमन्त्री चयन ग¥यो । उनले इरानस्थित ब्रिटिस ओइल कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरे । भूमीसुधार ऐन ल्याए । मजदुरको पक्षमा नीतिगत निर्णय गरे । सामन्तबादी कृषि प्रणालीको साटो आधुनिक प्रणालीको नीति लागू गरे । श्रमीक मोसादेघको पक्षमा र जमिन्दार बिपक्षमा बन्ने स्थिति देखियो । मोसादेघको लोकप्रियता र महत्वकाँक्षाले राजा पल्लबीलाई समेत तर्साउन थालिसकेको थियो । राजा पल्लबी आफ्नो अधिकार कटौति गर्न तयार नभएपछि मोसादेघले राजीनामा दिए । तर, जनदबाबका कारण राजा उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भए । राजाले प्रयोग गर्दै आएका कतिपय अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो ।
मोसादेघसँग ब्रिटेन चरम असन्तुष्ट थियो । ब्रिटिस प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिल जुनसुकै हालतमा मोसादेघलाई अपदस्त गर्न चाहन्थे । शुरुमा अमेरिका चर्चिलको प्रस्ताबमा सहमत थिएन । तेल कम्पनी गुमाउन परेको झोकमा इरान बर्बाद हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकाले चर्चिललाई निराश बनाइदियो ।
मोसादेघलाई हटाउन सिआइए परिचालित
सन् १९५२ मा डिविट डी ऐइसनआवर अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भए । सोसँगै अमेरिकाको इरान नीतिमा परिवर्तन भयो । मोसादेघलाई पदच्युत गर्न अमेरिका राजीमात्र भएन, सोका लागि अगुवाइ नै ग¥यो । उनलाई हटाउनका लागि एक मिलियन डलर जे जसरी खर्च गरेपनि हुने गरी सिआइएलाई दिइयो । न्युयोर्क टाइम्स र वासिँङटन पोस्टले प्राप्त गरेका सिआइएका गोप्य दस्ताबेज अनुसार मोसादेघका विरुद्धमा प्रचारयुद्ध, प्रदर्शन गर्न सिआइएले रणनीति बनायो । अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजभेल्टका नाति क्रेमिट रुजभेल्ट जुनियर त्यतिबेला मध्य एशिया र अफ्रिकाका लागि सिआइएका प्रमुख थिए । उनैले मोसादेघलाई पदच्युत गराउने रणनीतिको नेतृत्व गरे । मोसादेघलाई कम्युनिष्टउन्मुख भएको तथा सोभियत सँघप्रति बफादार रहेको आरोप लगाइयो ।
न्यूयोर्क टाइम्स र वासिङ्टन पोष्टमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सिआइएले मोसादेघको पक्ष र विपक्ष दुबैलाई सहयोग गरेको थियो । मोसादेघलाई पदच्यूत गर्ने तर राजा मोहम्बद रेजा पल्लबीलाई पनि काबूमा राखिराख्ने दोहोरो नीतिअनुसार त्यसो गरिएको थियो । अमेरिका, ब्रिटेनको सक्रिय साथसहित राजाले मोसादेघलाई पदच्युत गरे । त्यसपछि अमेरिकाको रोजाइअनुसारका पात्र प्रधानमन्त्री बनाइए । पूर्वजनरल फाजोल्लाह जाहेदी प्रधानमन्त्री बने । पुगनपुग २ बर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपनि उनको बर्हिगमन इरानी राजनीतिमा सदा बिश्लेषणको पाटो बनिरह्यो, यद्यपी राजा पल्लबीले इरानलाई समृद्धिको नयाँ उचाइँमा पु¥याइदिएका थिए ।
इरानको समृद्धि, अमेरिकाको साथ
राजाले इरानको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण कदम चाले । उनकै शासनकालमा इरानी राजतन्त्रको २५०० औँ बर्षगाँठ मनाइयो । उनले इरानलाई विश्वशक्ति बनाउने अभिष्टसहित स्वेतक्रान्तिको घोषणा गरे । इरानले आर्थिक र सैन्यदृष्टिले अभूतपूर्व तथा चमात्कारिक फड्को मार्‍यो । अमेरिकाले इरानसँग हातहतियारको ब्यापारमात्र गरेन, न्युक्लियस हतियार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाइदियो, प्रविधि सिकाइदियो ।
अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको भन्दापनि उच्च आर्थिक बृद्धिदर इरानको थियो । पूँजी ४२३ गुणासम्मले बढ्यो । इरान सैन्य दृष्टिले बिश्वको पाँचौ शक्तिशाली देश बन्यो । महिलालाई पहिलेभन्दा धेरै अधिकार दिइयो । प्राविधिक क्षेत्रमा इरानले फड्को मार्‍यो । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरियो । बिदेशिएका दक्ष जनशक्ति स्वदेश फर्किन क्रम चल्यो । इरान तेस्रो विश्वबाट एकाएक पहिलो विश्व बन्ने दिशामा अघि बढ्यो ।
क्रान्तिबारे सिआईए नै बेखबर
मोहम्बद रेजा पल्लबीले क्रान्तिकारी कदम नचालेका होइनन् । इरानलाई उचाइँमा नपु¥याएका पनि होइनन् । तर उनलाई मोसादेघको राजनीतिक भूतले पछ्याइरह्यो । उनीमाथि आफ्नो सस्कृति मासेको र पश्चिमाको पिछलग्गु बनेको बात लागिरह्यो । अर्कोतर्फ उनको परिवार र निकटवर्तीहरुको फेरो नलगाइ केही काम गर्नै नसकिने गरी राज्यसंयन्त्र खडा गरिएको थियो । कतिपयले यी र यस्तै कारण देखाएर राजाका बिरुद्ध आवाज उठाउन थाले । प्रर्दशनपनि हुन थाल्यो । बिद्रोहको भविश्यवाणी पनि सुनिन थाल्यो । तर, तेहरानमा मजबुत उपश्थिति रहेको ठानिएको सिआइएले पत्यारै गरेन ।
‘सम्पन्नता र समृद्धिको बदलामा को बिद्रोहमा उठ्ला ?’ सिआइए ढुक्क थियो । तर परिश्थिति अर्कै भइदियो ।
‘पश्चिमाको पिछलग्गु राजा चाहिदैन, इस्लाम धर्म सँस्कृति मास्न पाइदैन’ भन्ने आशयका नाराले सडक ताते । सन् १९७७ देखि शुरु भएको इस्लामिक क्रान्तिले १९७९ मा मूर्तरुप लियो । धर्मनिरपेक्ष इरान इस्लामिक इरान बन्यो । २५ सयदेखि विभिन्न बँशका राजाले राज्य गरेको इरान गणतन्त्र बन्यो । राजा मोहम्मद रेजा पल्लबी निर्वासित भए । सर्वोच्व नेतासहितको शासनव्यवश्था संविधानमै लिपिबद्ध गरियो । तेहरानस्थित अमेरिकी दुताबास बिद्रोही समर्थित युवा समूहले कब्जामा लियो । दुताबासका अधिकारी र कर्मचारीहरु बन्धक बनाइए । घटनाक्रम यसरी विकसित भयो कि आजसम्म इरान र अमेरिका सदाजसो युद्ध मनोविज्ञानमा रहँदै आएका छन् । तेहरानसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध टुटेको ४० बर्ष वितिसकेको छ ।
क्रान्तिपछिको इरानमा आक्रमण
क्रान्तिपछिको संक्रमणबाट इरान तँग्रिन खोजिरहेको थियो । सर्वोच्व नेता आयोतोल्लाह खोमिनीको उदय मध्यपूर्व र गल्फ देशका लागि पर्ख र हेरको अवश्थामा थियो । खोमिनीले आक्रामक विचार प्रवाह गरे । इस्लाम देश राजतन्त्रात्मक नहुने र धर्म निरपेक्षपनि नहुने उनको विचार थियो । राजतन्त्रसहितका साउदी अरब, कतारलगायतका इस्लामिक देशहरुपनि खोमिनीप्रति रुष्ट हुँदै गए ।
इरान र इराकका बीचमा सीमा विवाद थियो । संक्रमणकालमा रहेको इरानलाई झुकाउन सकिने निश्कर्षमा सद्धाम हुसेन पुगे । उनले विवादित भूमी कब्जा गर्न हमला थाले । इरान प्रतिकारमा उभियो । अमेरिकालाई इरानसँग बदला लिनु थियो । हार्न नपाउने सर्तसहित अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले इराकलाई हरतरहको सहयोग गरेको बताइन्छ । आतंककारीलाई सहयोग गर्ने देशको सूचीबाट इराकको नामपनि हटाइयो । सन् १९८० को दशकभर इरान र इराकबीच युद्ध भइरह्यो । खुमेनीको प्रभाव बढेमा आफूहरुलाई पनि संकट आइलाग्ने निष्कर्षमा पुगेका साउदी अरबलगायतका देशले इराकलाई खर्बौँको सहयोग गरे । तर इराकको केही सिप लागेन, इरान डगेन । इरानलाई त्यतिबेला सिरियाले मात्र प्रत्यक्ष सहयोग गरेको बताइन्छ ।
होला त तेस्रो विश्वयुद्ध ?
इरानमाथि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको बर्षौँ भइसकेको छ । अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानले हैरानी नझेलेको पनि होइन । तर, इरानी अधिकारीहरु अमेरिकासँग झुक्न तयार छैनन् । इरानले आफ्नो प्रभाव विस्तारै बढाउदै लगेको छ । अमेरिकाले सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई हटाउन बिद्रोहीलाई साथ थियो । इरानले असदको पक्ष लियो । अमेरिकी आक्रमणका बाबजुत असद टिकिरहेकै छन् । इरानले लेबनान, इराक, पालेस्टाइनलगायतका देशमा बिद्रोही दस्ता खडा गरेको वा त्यहाँ आक्रमणको तयारी गरेको अमेरिकी दाबी छ । यी सबैका लागि इरानका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए–इस्लामिक रिभोलुस्नरी गार्ड कप्र्सका प्रमुख होसेन सुलेइमानी । उनै सोलेइमानीको अमेरिकाले हालै इराकको राजधानी बग्दादमा हत्या गरिदियो ।
इरानले आफ्ना जनरलको हत्याको बदला लिने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाले इरान बदलामा उत्रिए उसको अस्तित्वनै नामेट पारिदिनेसम्मको धम्की दिएको छ । बिश्व अमेरिका तथा इरानको पक्षविपक्षमा खडा भएजस्तो देखिएको छ । योसँगै तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भाव्यताबारे चर्चा पनि हुन थालेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको नमिठो अनुभव, सूचनाप्रविधिमा भएको अकल्पनीय प्रगति आदिका कारण तेस्रो विश्वयुद्ध कुनै नेता वा देश विशेषले चाहदैमा हुने देखिदैन । सिरिया, इराक, अफगानस्थानमाथि अमेरिकी आक्रमण हुँदा पनि तेस्रो विश्वयुद्धको चर्चा नभएको होइन । फरक यत्ति हो यी देशभन्दा इरान शक्तिशाली छ । तेस्रो विश्वयुद्ध नभएपनि अब इरान र अमेरिकाका बीचमा टकराव बढ्ने निश्चित छ ।
भुल्न नहुने पक्ष अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रपति निर्वाचन पनि हो । टम्पलाई तल्लो सदनले महाअभियोग लगाएको छ । सिनेटमा महाअभियोग बारे छलफल हुनेवाला छ । राष्ट्रपति विल क्लिन्टनमाथि महाअभियोग विचाराधीन रहेकै बखत उनले इराकमाथि बमबारी गरेका थिए । महाअभियोगबाट बहश अन्यत्र मोड्न आक्रमण गरेको विरोधीले उनीमाथि आरोप लगाएका थिए । अहिले त्यसैको पुनरावृत्तिका रुपमा पनि सुलेइमानीको हत्या र सम्भाव्य युद्धलाई हेरिएको छ ।
अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन केही न केही गर्नै पर्ने दबाबमा राष्ट्रपति ट्रम्प छन् । बाहिरी पक्षसँग युद्ध जारी रहेको बखत आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गौण हुने गरेको अमेरिकी इतिहास छ । देशभित्र उतिसारो लोकप्रिय नभएपनि इराक युद्धका कारण जर्ज बुश दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको विश्लेषण गरिन्छ । युद्धका क्रममा नेतृत्वको निरन्तरता महत्वपूर्ण मानिन्छ । लरतरो बिदेश नीति तथा देशभित्रपनि हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न नसकेको बात खेपिरहेका ओबामाको दोस्रो कार्यकाल अनिश्चयको घेरामा थियो ।
निर्वाचनको केही समय पहिले अमेरिकाको सर्वाधिक खोजी र चासोमा रहेका अलकायदा प्रमुख ओशमा बिन लादेनलाई अमेरिकाले मा¥यो । लादेन हत्याका लागि ओबमाको नेतृत्वले जसैजस पायो । लरतरो ठानिएका ओबामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचितमात्र भएनन्, एकाध स्मरणीय राष्ट्रपतिका रुपमा दर्ज भएका छन् । इतिहासका यी जोडघटाउ हिसावी मामिलामा माहिर मानिएका ट्रम्पले नगर्लान भन्न सकिन्न । तर, यत्तिमा चिज निर्भर हुने छैन ।
इरान अमेरिकी विश्वयुद्ध
हातको कोरोना धोए जाला, माथको कोरोना भगाउन नयाँ हिसाबले पढाइ थालौं
कोरोनाको अग्निपरीक्षामा नेता
थोत्रो गाडीमा नयाँ चालक
बुधबार, ०५ चैत २०७६
भारतीय क्वारेन्टाईनमा नेपाली ! कस्तो छ अवस्था ?
कांग्रेस नेता भण्डारीद्वारा पार्टी पदाधिकारी एवम् सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग
चीनको शोकमा प्रधानमन्त्री ओलीको ऐक्यवद्धता
नेपालभित्रै एकबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि